Faah Faahin laga helaayo Qarax lugu hoobtey oo ka dhacay Degmada Jilib. | SMC
Home WARARKA MAANTA Faah Faahin laga helaayo Qarax lugu hoobtey oo ka dhacay Degmada Jilib.
Faah Faahin laga helaayo Qarax lugu hoobtey oo ka dhacay Degmada Jilib.
wararka ka imaanaya degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe ayaa Sheegaya in xero ciidan oo Alshabaab badan ku sugnaayeen qarax ka dhacey.
qaraxa ayaa lasheegey in uu halkaasi ka dhacey xilli ay diyaarinayeen kooxda alshabaab gawaari miineysan sida ay xaqiijinayaan ilo lagu kalsoonaan karo.
Qaraxan oo aad u xooganaa ayaa laga maqley daafaha magaalada, waxaana markii hore loo maleynaayey duqeymo diyaaradeed, walow markii danbe laxaqiijiyey in uu ahaa qarax ka dhashey baabuur qarax lagu diyaarinayay.
lama oga tirada rasmiga ah ee kaga geeriyootey Dagaalamayaasha alshabaab qaraxaasi, walow saraakiil katirsan sirdoonka soomaaliya oo magacooda qariyey sheegeen in xerada ay ku sugnaayeen 180 dagaal yahan, qasaare dhimisho iyo dhaawac badana jiro.
xiriiro aan la sameyney dadka deegaanka ayaa sheegaya in qasaare hadtiyadeed uu jiro, waxaana la xaqiijiyey in ay gubteen labo bakhaar oo ah kuwa raashiinka lagu keydiyo oo ku dhowaa goobta qaraxa iyo 4 gaari oo 2 kamid ah ay laheed mid kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeyan Degmada Jilib.
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya gawaarida halka loowadey wararka qaar ayaa sheegaya in loo diyaarinayey magaalada moqdisho halka wararkalana ay sheegayaan in loo wadey degmada Baraawe ee Gobolka Shabeelaha hoose.
Previous articleMAAYLAND IYO MILATARIGA FEDERAALKA MAANTA LAAKIIN!!
Next articleDEG DEG: Wasiirkii hore ee Arrimaha dibeda Itoobiya Seyoum Mesfin oo la dilay